China Recyclable Stand Up Pouches factory na ndị na -ebubata ya EVERGREEN
Obere akpa Recyclable Stand Up, bụ ụdị akpa na -agbanwe agbanwe ma na -agbanwe agbanwe, na -enye ndị ahịa ohere ịhazi ọdịdị na nha dịka nkọwa ha siri dị. Ha bụ nhọrọ dị mma maka ngwaahịa a mịrị amị na ọbụna mmiri mmiri. Anyị nwere ike ịtọ windo maka ụdị dị iche iche iji melite mmetụta anya na shelf ụlọ ahịa. Ala na -akwụ ọtọ mgbe ngwaahịa juputara. A na-ejigide elu akpa ahụ site na ịwepu dọkapụ na zipa nwere ike ịdị ka ya. Iji mee ka ịdịmma onye ọrụ dịkwuo mma, enwere ike ịgbakwunye eriri laser n'elu mkpọchi uwe. Site na mbipụta agba 9+1 site na gravure, akpa nwere ezigbo mma yana ezigbo mbipụta akwụkwọ.
Akpa akpa anyị na-ebugharị ebugharị na-abịa n'ụdị abụọ dị iche iche, obere akpa K-akara na obere akpa okirikiri.
Ala K-akara, akàrà ndị dị n'akụkụ abụọ na-ebili ngwa ngwa n'akuku 30 iji belata nrụgide n'akụkụ akpa. Ọ dị mma maka ibu arọ;
A na -agbanye okirikiri okirikiri n'akụkụ ya, na -ekwe nkwa echiche mara mma nke akpa ahụ niile. Ọ dị mma maka ngwongwo dị mfe.
Ha abụọ na -enye ihe mgbochi dị elu iji mee ka ọdịnaya dị ọhụrụ.
Na -eme ka a kwụpụ ebe maka ịzụ ahịa.
Ọdịiche na mbibi na ntinye dị, spouts na -enye ohere ịwụnye ngwa ahịa na mmiri dị mfe.
Obere akpa Standup
Mkpa akpa standup
Agbakwunyere gusset ma ọ bụ ala ịkọ ala
Akpa akpa ụdịdị dị
Njirimara weghachiri eweghachi nwere ike ịdị mma maka ndị ahịa
Nhọrọ ihe mgbochi ọkọlọtọ na -enye mgbochi mmiri dị mma
Nhọrọ oke mgbochi na -enye ezigbo ikuku oxygen na mgbochi mmiri
Mbipụta dị n'elu ya na varnish nchedo n'elu
Dị na windo doro anya
Nke gara aga: Mpempe Gusset Akụkụ Recyclable
Osote: 3 n'akụkụ akara & oghere obere akpa/Akpa akpa rọba/akpa rọba nri